Magacyada SHANTA Ciyaartoy Ee Xulka Germany U Doortay Inay U Laadaan Rikoodheyaasha Kulanka England La Kala Bixi Waayo - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMagacyada SHANTA Ciyaartoy Ee Xulka Germany U Doortay Inay U Laadaan Rikoodheyaasha Kulanka England La Kala Bixi Waayo
Magacyada SHANTA Ciyaartoy Ee Xulka Germany U Doortay Inay U Laadaan Rikoodheyaasha Kulanka England La Kala Bixi Waayo
Xulka qaranka Germany ayaa shan ciyaartoy u doortay inay u laadaadaan rikoodheyaasha kulanka England ee wareegga 16ka Euro, haddii ciyaarta caadiga ah ay barbarro kusoo dhamaato oo ay la isla gaadho gool-ku-laad.
Jarmalka oo xulka qaranka England si xun ugu garaacay, kana reebay Koobkii Adduunka 1990kii, Euro 96 iyo Koobkii Adduunka 2010, ayaa taxadar ka samaynaya halista ciyaartoyda da’yarta u badan ee xulka England ee dalkooda lagu ciyaarayo, kuwaas oo doonaya inay ka aargoostaan.
Tababare Gareth Southgate oo ka mid ahaa ciyaaryahannadii xulka England ee Euro 96 uu Jarmalku rikoodheyaasha ku reebay, isla markaana khasaariyey kubaddiisii rikoodhaha ahayd, ayaa waxa uu maalmihii ugu dambeeyey carbinayay dhawr ciyaartoy oo uu usii diyaariyey inay tuurtaan rikoodheyaasha, haddii la isla gaadho.
Sidaas oo kale ayuu tababare Joachim Low sameeyey, waxaana uu lasoo baxay shan laacib oo horeba u ahaa khubaro, balse uu haddana usii sheegay sida ay ugu kala horreynayaan.
Sida uu qoray wargeyska The Bild, Toni Kroos ayaa laadan doona rikoodhaha ugu horreeya xulka qaranka Germany, waxaana ku xigi doona saddex ciyaartoy oo kooxda Bayern Munich ka tirsan. Thomas Muller ayaa laadan doona rikoodhaha labaad, kaddib Jushua Kimmich, Leon Gretzka iyo Kai Havertz oo rikoodhaha shanaad tuuran doona.
Haddii rikoodheyaashu sii socdaan oo shanta ugu horreeya lagu kala bixi waayo, waxa uu Joachim Low u diyaariyey saddex ciyaartoy oo kale oo iskugu xigaya sidan: Ilkay Gundogan, Marcel Halstenberg iyo Matthias Ginter, laakiin waa haddii ay garoonka ku jiraan waqtigaas.